Huawei na-edepụta akwụkwọ ikike nke na-akọwapụta ihe ọzọ na ọkwa | Gam akporosis
Huawei files patent ịmata ya ọzọ ọzọ ka ihuenyo notch
N'ịgbalị iji nye ndị ahịa smartphones obere ntakịrị bezels gburugburu ihuenyo ahụ, OEMs ejirila ụdị ụdị ejiji mbụ.
Ọkwa a bụ nhọrọ kachasị ewu ewu taa, ebe ọ na-enye anyị oke nha ihuenyo, n'agbanyeghị eziokwu na ọ naghị adịkarị ụtọ n'etiti ndị ọrụ ... opekata mpe ọ bụghị ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ha. Imirikiti Fans ga-achọ ịnwe ekwentị na ọkwa ahụ. Ma, dị ka ntanye ntanye ma ọ bụ igwefoto foto onwe onye dị na ngwaọrụ ụfọdụ, Huawei na-arụ ọrụ na ụzọ ọzọ na ọkwa nke nwere ike ibido n'ụfọdụ ụdị ya.
Igwefoto mmapụta bụ otu nhọrọ kachasị amasị iji zere mkpachị ihuenyo "iwe" nke na-akpasu iwe karịa otu onye ọrụ, nwata nwoke ọ na-ewu ewu na ụlọ ọrụ na ọsọ ọsọ. Agbanyeghị, ndị nrụpụta aghaghị ịnagide ihe ịma aka nke ịnwe usoro eji arụ ọrụ na-eme ihe na-ewelite nchegbu gbasara ịdịte aka.
Huawei patent nke na - egbochi nyocha ihuenyo
Huawei nwere ike ịnwe ụzọ ọzọ dị mma na ọkwa nke anaghị etinye aka na igwe ma ọ bụ igwefoto onwe ya, ma ọ bụ na-etinye aka na ntanetị.
Ama ama, dị ka a na-atụgharị anya na akwụkwọ ikike patent ahụ, gosipụtara ngosipụta na-enweghị atụ nke ya na obere slim na akụkụ bezels na-esonyere. Site na akụkọ niile, Huawei na-egwuri egwu site na ohere nke oke bezel.
A na-atụgharị ọnụ ọnụ n'elu n'ụkpụrụ dịka ụdị a gosipụtara na ụfọdụ ekwentị moitu. Mpụta dị na mpụga na-emepụta ohere zuru ezu iji kwado igwefoto selfie na onye na-ekwu okwu na ntanetị. Otú ọ dị, imewe ahụ adịghị mma. N'ezie, ọ nwere ike ịnụtụ ntakịrị ilu, n'ihi na ọ nwere ikuku ochie na ya.
A na-ekpu okpu eze Huawei dị ka onye ndu na ahịa mbadamba gam akporo
Atụmatụ Huawei a ga - eji ya, na ihe niile nwere ike, naanị na mpaghara dị ala na etiti mgbe ị dị njikere maka ire ahịa. N'ọnọdụ ọ bụla, nyere na atụmatụ a bụ patent n'oge a, enweghị nkwa na nnukwu ụlọ ọrụ ga-ahapụ ekwentị na ụdị ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Huawei files patent ịmata ya ọzọ ọzọ ka ihuenyo notch
Etu ị ga-esi họrọ isiokwu ịgbaso na Google Discover